Archive du 09-sept-2021
Miara Manonja “Ho hita eo raha sahy na matahotra ny Filoha”
Naneho hevitra momba ilay raharaha miteraka resabe mahakasika ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Rtoa Lalatiana Rakotondrazafy sy Atoa Andry Andriatongarivo vadiny,
Ny tody itsy misy
Heverina fa tsy tokony haha sasatra ny hampahatsiahivana hatrany fa ny atao hoe “tody” dia ny fiverenan’ny atao ihany. Antony niheveran’ny Ntaolo Malagasy io fa akaikin’ny zanak’olombelona hatrany na hoe
Tahirimbolam-panjakana Andry Nirina Rajaofetra no Tale Jeneraly vaovao
Telo herinandro taorian’ny nanesorana ny Tale jeneralin’ny tahirimbolam-panjakana teo aloha Atoa Ihaja Ranjalahy nandritra ny filankevitry ny minisitra ny 18 aogositra, voatendry omaly ny solony.
Ady amin’ny Pesta Araha-maso akaiky ny any Miandranda - Arivonimamo
Ho fanamafisana ny ady amin’ny valanaretina pesta dia nanantanteraka fidinana ifotony teo anivon’ny CSB Miandrandra, distrikan’Arivonimamo,
Fandrobana mpamongady teny Alasora Saika hotaperin’izy mivady ny ain’ilay ramatoa
Mpivady roa tompon’antoka tamin’ny vono olona tetsy Alasora no saron’ny polisin’ny CSP eny an-toerana. Tompona mpamongady lehibe iray eny an-toerana.
Depiote Alain Ratsimbazafy “Tsy haka toeran’ny filoha lefitra faha-7 izany ny TIM”
“Tsy mivaky ny antoko tiako i Madagasikara ary iray. Iombonana ny fanapahan-kevitra aisina ao; ny lehiben’ny antoko Atoa Marc Ravalomanana no efa niteny fa tsy handray ny toeran’ny filohan’ny mpanohitra
Namaly ny minisitra Lalatiana i Faniry Ernaivo “Inona no hidiran’ny mpanohitra amin’izay ataonareo 3 any”
Namaly sy naneho hevitra mikasika ny resabe momba azy ny Minisitry Lalatiana Rakotondrazafy omaly. Nalaza ary niely tamin’ny tambazotran-tserasera sy ny fampahalalam-baovao moa ny filazana fa sakaizan’ny
Fitaterana eto Antananarivo “Tsy ho foana intsony ny taxi-moto”
300 ny taxi-moto eto Antananarivo raha kely, tsy ho foana intsony io ary tsy maintsy hiasa na ao anatin’ny tsy ara-dalàna aza, hoy izy ireo.
Fitantanana ny volan’ny covid-19 Andrasana ny valim-panadihadian’ny “Cour des comptes”
Isan’ny nanamarika ny hamehana ara-pahasalamana nolalovantsika tao anatin’ny fotoana naharitra ny fahalalahan’ny Fanjakana tamin’ny fanapahan-kevitra raisiny amin’ny fitantanana ny firenena, raha toa ka voafetra kosa ny
Faha 35 taonan’ny tarika Kiaka Mpanakanto maro no hanotrona
Ao anatiny hatrany amin’ny fankalazana ny faha 35 taonany ankehitriny ny tarika mpiangaly Rock Malagasy ela nietezana, Kiaka.